I-Horoscope ka-2017 ukusuka eTamara Globa
UTamara Globa (Erzova) ungomunye wabesifazane abathandekayo nabathandekayo bezinkanyezi eRussia. Ithalenta yokuqonda ukuthi izidumbu zasezulwini zihleka ngani, wazitholela yena lapho eneminyaka engu-8 ubudala. Wafika emfihlakalweni yasebhakabhakeni nge-palmistry, ayeyifundayo ngokusho kwencwadi endala, egumbwe e-rubble e-attic. Amakhasimende akhe okuqala, efisa ukufunda izifihlakalo zendawo yonke, babengabangane nezihlobo. UTamara Globa wamlethela inselelo yobuchwepheshe ezingeni lobuchwepheshe ngasekupheleni kwawo-1980. Ukufundwa kwezinkanyezi akubanga nje kuphela impilo yakhe yomphakathi, kodwa nokuphila komndeni wakhe lapho eshada noPavel Globa. Ukwaziswa okujulile nokucwaninga ngezinkanyezi kwaphakamisa umbhangqwana oshadile wabalingani bezinkanyezi ekufinyeleleni kwendabuko ekuqaleni kwe-perestroika, lapho izwe lithola imfashini yezinkanyezi. Namuhla, uTamara Globa uyaqhubeka nokuthuthukisa amakhono akhe, futhi ukwabelana ngolwazi lwakhe ngezifundo, izinkulumo, ukuthuthukisa izenzakalo, ubhala izincwadi futhi ashicilele izihloko. Unyaka ngamunye uTamara Mihailovna wenza i-horoscope jikelele ngokuzayo. Umnyaka weRoster wawungenjalo.
Isibikezelo sombhali wezinkanyezi uTamara Globa ngo-2017 wendilinga yezinkanyezi
Impilo yakho iyoxhomeke kakhulu ekutheni, isabelo sokuvimbela isifo senhliziyo, ama-pancreas nezigulane ze-thyroid. Ngisho noma manje azikho izinkinga kubo, ngonyaka ozayo kuyindawo yakho ebuthakathaka.
Lindela okuhlangenwe nakho okuthandekayo kokuthandwa kanye neziphepho zemizwelo ethandekayo. I-rooster izohlanganyela nawe ohlelweni olugcwele, kodwa kuphela esimweni ukuthi nawe ngeke uhlale ungenzi lutho. Ama-Aries omndeni kufanele anakekele kakhulu umndeni futhi anganiki izizathu zomhawu.
Izimali kanye nokusebenza
Uzophumelela uma izimiso zakho zizithiba, ukuthula nokulinganisa. Unyaka onobulungiswa webhizinisi uzoletha abalingani abathenjisayo abasha. Cwangcisa ngokucophelela isabelomali sakho ukuze ungavumeli ukulondoloza ukungabi wabahaha.
Uma ungathathi isikhathi esanele sokunakekelwa kwempilo yakho (ukuvimbela, ukuhlolwa okufika ngesikhathi), ngeke ulalele umzimba, khona-ke maduzane ungaba emagcekeni esibhedlela. UTamara Globa uxwayisa ukuthi ungadluli imilenze yakho.
Amanoveli noma izinsizakalo ezingase zenzeke, eziboshwe ekuhambeni kokusebenza. Kodwa ungaphelelwa amandla, "umlingani" akakwazi ukuzingelwa uthando, kodwa izinzuzo zezinto ezibonakalayo noma zebhizinisi. Emindenini, i-idyll nothando kuzobusa.
Emkhakheni wezobuchwepheshe ulindele impumelelo eqinile: ukuqaliswa kwemibono, ukusekelwa kwabanikazi abathintekayo, ukufezwa kwezinhloso, inzuzo enkulu. Isikhathi esihle sokukhulisa ibhizinisi lakho.
Isikhathi se-vivacity, umoya onamandla nempilo enhle. I-astrologers icebisa ukusebenzisa isimo esihle sempilo yezemidlalo esebenzayo. Kodwa-ke, uma kube nesifo esibi kakhulu ngosuku olulandelayo, kungcono ukulinda isikhathi eside nemidlalo. Yiba nesikhathi.
Lungiselela ukuthanda nokuthandwa. Amawele angenalutho uTamara Mikhailovna ubikezela imihlangano emisha, abajwayele, imihlangano. Ukuqinisa ubudlelwane bomndeni. Nokho, hlonipha kakhulu nezihlobo zengxenye yesibili.
Umsebenzi ubeka ngokuqiniseka ukuthi uphakamise izinga lezemisebenzi. Ngenxa yalokhu uzobe ulungele ukufunda ulwazi olusha nokuzivuselela. Qalisa ukuqapha ngokubolekisa imali noma ukutshala izimali kumacala "okuzayo". Ukukopela okungenzeka.
Amandla aqoqiwe namandla okudinga ukufeza uhlelo. Izithiyo ezingase zivele zizokwenza kube nzima kuwe, ngakho-ke umsebenzi owenza kahle futhi umthwalo wemfanelo ngokuphumula okugcwele. Vikela isimiso sezinzwa!
Unyaka uzoba nomusa kubangane abasha. Lena ithuba elihle lokuhlangabezana nesiphetho sakho futhi wakhe ubuhlobo obuqinile naye. Qhubeka! I-Rooster ithembisa isibindi sakho sokukhuthaza entwasahlobo. I-Crayfish yomndeni iyisikhathi esifanele sokuletha ubudlelwane nezinga elisha elifanele.
Yiba nomuntu ozifundisayo, ugcwalise imithwalo yakho yezemfundo ngolwazi olusha. Kuzoba usizo kuwe empini ezayo yendawo engcono noma ngisho nomsebenzi omusha. Abancintiswano bayoba namandla. Qaphela ngemali engabazazayo.
I-rooster ivikela impilo yakho, kodwa nokho akufanelekile ukuyihlola amandla futhi uyihlukumeze ngemithwalo eningi kakhulu. Hlonipha umzimba wakho, umzimba nomphefumulo. Lawula ukulayishwa kwezinsuku, uhlanganyele kusikhathi sokuzilibazisa, ngena ezemidlalo, uphumule! Khona-ke ngonyaka ozayo isimo sakho sempilo ngeke sikukhubekise ngezifo.
Unyaka omatasa wezingonyama ezishadile uzonikeza ithuba lokubona ukwethembeka komlingani okhethiwe. I-Bachelors Rooster izophinde ilandele unyaka othakazelisayo. Kodwa qaphela, ungakwazi ukuphula inhliziyo yakho.
Ukufeza impumelelo oyifunayo emsebenzini wakho noma ebhizinisini, ungadinga ukuxhumana. Bazosiza hhayi nje ukuqhubekela phambili endleleni ehleliwe, kodwa futhi ukuqeda abancintisana abaqotho kakhulu. Cabanga ngokucophelela ngokusebenzisa kwakho imali.
Izimangalo ngempilo zingaqala ekuqaleni konyaka. Isizathu yisikhathi esiyingozi kakhulu se-ARVI. Qinisekisa ukuzivikela emzimbeni futhi ungenzi umuthi. Lokhu kuzokusiza ukuba ululame ngokushesha.
Ijezi izokulinga ngendoda engavumelekile. Unganikeli! Kugcwele ukudumazeka! Ikakhulukazi ulinde umlingani ofanelekayo. I-Virgo Family Tamara Globa ibikezela ukuqinisa ubudlelwane entwasahlobo noma ehlobo.
Umgwaqo wonyaka ozayo uzokwehliswa yi-Virgo isinyathelo. Ubuchwepheshe, ukubekezela nokukhuthaza kuzokusiza ukuthi uthathe lezo zindawo eziphakeme ezinye ezingatholakali. Kudingeka ukugeleza kwemali okuphawulekayo.
Wena wezinkanyezi weluleka imisebenzi yezempilo, isibonelo, endaweni yokuhlalisa. Unempilo kuwe futhi ngakho kuyoba kuhle, kodwa ukuphumula kuwe kuboniswa izinkanyezi. Ukucasula okubangelwa yi-allergenic kungenzeka.
Unenketho: uthando noma imali. Khetha uthando! I-Rooster yakhe izokunikeza i-oda eliphakeme kakhulu. Emndenini weLibra eshadile, izinkinga nezinkinga zansuku zonke kungenzeka. Isiqingatha sakho sizobonisa ukubekezela okunomusa, kodwa uyakwazi ukunqotshwa ukucasuka.
Ungase ungakulungeli ukungena esivumelwaneni sezinguquko zomsebenzi ezizofika kuwe entwasahlobo. Ngemali awunazo izinkinga uma ungabeki okokuqala kuqala.
Izinkinga zezempilo zithembisa ukuzivikela okubuthakathaka. Owokuqala "wezisulu" zawo kungaba yindlela yokuphefumula. Ekuqaleni konyaka, kunengozi yokucindezeleka ngemuva kokuhlukunyezwa kwe-ARVI. Qinisekisa ukuvikelwa komzimba!
I-Lonely Scorpios izohlala ngaphandle kwengxenye, uma ingathathi "izinyawo ezandleni", futhi ingabonisi emhlabeni. Izimpawu zomshado zingabonisa igebe ebuhlotsheni, ngothando oluye lwavela ohlangothini.
Emisebenzini noma emisebenzini yebhizinisi uzobe uphefumulelwe ngumuntu othanda ukuthanda futhi ophumelelayo. Kungenzeka ukuthi yena ngokwakhe uzothatha nawe ngenhloso enhle. Unyaka ulungele ukutshala izimali ezinkulu.
Umzimba wakho uzothambekela ekufakeni ubuthi, kanti ezinye izinkinga zamathumbu nazo kungenzeka. Nciphisa ukusetshenziswa kokudla okungekho emthethweni nokuphuza utshwala. Qaphela ngamathambo, amalunga nomgogodla.
Ukwazisa okuthandwayo, okuthembisa ukuthi kuzokwenzeka entwasahlobo, angeke ulethe uthando, kodwa uzothola umngane onokwethenjelwa. Ingxenye yesibili yeSagittarius yomndeni ingadinga ukwesekwa. Ungabi yinduna!
Ungacabanga ngomsebenzi omusha. Kodwa-ke, kufanele uhlolisise konke kahle: unakho ikhono lokufisa izifiso eziphakeme? Esikhathini senkampani yezimali, lindela iminikelo yemali noma ukubukeka komxhasi.
Unyaka ophumelelayo kulabo baCapricorns abafisa ukuhlanganyela nesisindo esiningi. Kodwa ungahlukumezi umzimba wakho ngemithwalo eningi ngokweqile nokudla. Hamba ngesitatimende ngokuzethemba, kodwa kancane kancane - ekupheleni konyaka uyobe usulahla isisindo esizondayo.
I-rooster iphekwe ukuze uthande. Cabanga ngokuthi ufuna ngempela ukulahla isizungu. I-satellite izobe iphikelela kakhulu. Ama-Capricorns, abanobuhlobo, azofuna ushintsho. Kodwa izinguquko emndenini, futhi cishe, zizohlanganiswa nokuphila okusondelene.
Ukuqhathaniswa nendawo yomsebenzi kanye nemisebenzi yeCapricorns akulindelekile ukuba kube khona izinto ezintsha. Ukuzitholela emsebenzini futhi usebenze kanzima kuzodingeka kulabo abathola umsebenzi kuphela. Noma kunjalo, ngeke kusize ukuxazulula izinkinga zezezimali. Kungadingeka ukuthi usebenze ndawonye.
Kumele ucabange ngomuntu wezinsuku zomuntu siqu. Uma ungeke ukwazi ukukhokhela umxhumanisi wokudla okunomsoco, okungenani uhloniphe izidingo eziyisisekelo zokudla kanye nekhwalithi yokudla. Nika ukudla okusheshayo nokudla okunye okuvusa isifo se-GIT.
Izinkanyezi zibonelela kuwe indlela evulekile yothando. Uma uthanda umuntu, kodwa wesaba ukuthatha isinyathelo, manje yisikhathi. Ubudlelwane kufanele buvikelwe ezifunweni zabo ezingathandeki kanye nemibono yobunikazi.
Umsebenzi ozozinikela ngonyaka ozayo ungaba yindaba yokuphila kwakho konke. Ikakhulukazi kubakhathaza labo ba-Aquarius, abahlala bematasa ngobuciko. Ngeke kube yinto nje kuphela yomphefumulo, kodwa futhi kuyoletha imali engenayo kakhulu.
UTamara Globa uncoma ukuthi uhlolisise impilo, kodwa ungasindiswa kuso. Ungakhathazeki ngokukhipha kancane. Umzimba ungadalulwa kwezifo ezithathelwanayo, ngakho-ke qalisa amavithamini amaningi.
Unyaka we-Rooster uzokunika ithemba kumaPisces, abakhululekile futhi abanamahloni kulabo ababajwayele. Abamele isibonakaliso esivele benesibhangqwana kufanele banakekele ukuthola imizwa emisha emihle. Umndeni wakho ungadonsa umkhuba we-banal.
Yilungele umthwalo owengeziwe. Uzonikezwa isikhundla esiphakeme noma iphrojekthi entsha. Unganqikazi ukusetha izimo zakho ukuqonda kahle umsebenzi. Awunazo izinkinga ngemali.
I-Horoscope ye-Aquarius-Abesifazane ngo-December 2016
I-horoscope ngqo ngoFebruwari 2018 evela kuPavel Globa
I-Horoscope yowesifazane waseCanada ngo-June 2017
Yikuphi ukukhwabanisa okukufanisa ngesibonakaliso se-zodiac
I-Horoscope ngo-September 2017 kusuka ku-Pavel Globa: Izinkanyezi zithembisa ukuthini ngenyanga yokuqala ekwindla
I-Horoscope ngo-Okthoba 2017 kusuka kuVasilisa Volodina: Uthando nebhizinisi phakathi kwekwindla
Yini amadoda ayinake lapho ehlangana nowesifazane
I-horoscope yocansi ka-Aquarius
Izivivinyo zasekhaya zokukhulelwa
Ama-Postcards owodwa ngoNyaka Omusha
Isondlo esifanele - impilo ende
Ikhekhe lekhadi elinama-blueberries
Ukuqala kwentsha emantombazaneni
Metallotherapy: izindawo zokwelashwa zensimbi
Umyeni wami akafuni mina: yini okufanele ngiyenze?
I-ashberry ebomvu kumuthi womuntu
I-Pilates: ukuvivinya umzimba
Yini esiyilindele eminyakeni engu-25 ezayo: ukubikezela kwamathamistri adumile
Amaconsi ejoka lapho esebenza nekhompyutha
Isibikezelo sezinkanyezi ngesibonakaliso sezinhlanzi ngo-2010